Iphrofayela Yenkampani | IShijiazhuang Yungong Machinery Technology Co., Ltd.
IShijiazhuang Yungong Machinery Technology Co., Ltd.
Akhiwe Xingtang County zone asathuthuka kwezomnotho, Shijiazhuang City, nge indawo 40000 metres square futhi abasebenzi abangaphezu kuka-300. Kuyibhizinisi lobuchwepheshe elihlanganisa i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo yezobuchwepheshe.
Le nkampani ibandakanyeka kakhulu ekubunjweni ngokunemba nasekusebenzeni imishini yokudla. Inqubo yokukhipha utshalomali yi-silicon sol, enomphumela waminyaka yonke ongaba ngamathani ayi-3000 wokusakaza. Izinto zokwakha zifaka zonke izinhlobo zensimbi engagqwali, i-carbon steel, i-alloy steel ephansi namanye ama-alloys akhethekile nensimbi engagqwali eyi-duplex. Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi kuma-Valves pumps impellers pipe fittings, ingxenye yezimoto, imishini yokudla, izesekeli zemishini yamaminerali, imikhiqizo yethuluzi lehadiwe nokuhlobisa kwensimbi.
Imikhiqizo yabalingisi bokutshala imali baziwa ngekhwalithi yabo enhle nokuthembela kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza abenzelwe lona. Inqubo yethu ingadala izinto eziyinkimbinkimbi nezinsiza kalula.
Ukulingisa kokutshala imali kunenzuzo eziningi, kufaka phakathi: Ukukhiqizwa kwengxenye enemininingwane ephelele Ukunciphisa izindleko zokukhiqiza / Izidingo zemishini nezomhlangano / Ukusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zama-alloys.
Imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, eMelika nakwamanye amazwe.
Inkampani yethu ingumnikazi wesitshalo sesimanje esijwayelekile, esinamandla amakhulu wobuchwepheshe, ubuchwepheshe obuhle, ukucacisa okuthuthukile kokulingisa nokuhlola imishini. Ngeminyaka yokuhlangenwe nakho kokuhweba okuthekelwayo, ukukunikeza ngensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva, okwamanje unikeza amakhasimende ngemikhiqizo yokuqala.
Siyakwazi ukunikeza okukhulu noma okuncane (kusuka ku-5g kuye ku-30kg ngocezu ngalunye) nokukhetha okuyinkimbinkimbi ekubunjweni. Ithimba lethu lobuchwepheshe likhiqiza ubuchwepheshe bokuhlanganisa ukuqinisekisa ukuthi izixazululo zethu zokunemba ngokunemba zihlala zihlangabezana nokulindela kwakho.
• Ithimba lochwepheshe likusiza ukuthi usebenzise ikhambi eliphelele kusuka ekwakhiweni kwemikhiqizo, ekusakazeni, machining ekwelapheni ukushisa, ukwelashwa kwendawo, njalonjalo ukwehlisa izindleko zakho.
• Ukuhlola indawo enqubweni ngayinye, kanye nokuhlolwa kokugcina okungu-100%.
• Beka phambili ukulethwa kwamakhasimende angaphandle.
• Ukuxhumana ngokulula kweNgisi kanye nensizakalo yezindiza.
Isimo Sengqondo: Ithemba
Ikhwalithi: Isakaza inkazimulo
Ithimba: Ukuchuma ngokubambisana
Ukuqamba: Umphefumulo wenkampani